Daacish oo laga qabsaday inta badan magaalada Tal-afar & dagaal qaraar oo weli ka socda (Daawo Sawirro) – dulmidiid
Daacish oo laga qabsaday inta badan magaalada Tal-afar & dagaal qaraar oo weli ka socda (Daawo Sawirro)
Ciidamada Ciraaq ayaa sheegay inay dib uga qabsadeen kooxda Daacish inta badan magaalada Tal Afar ee ku taala dhinaca waqooyigalbeed ee dalka Ciraaq.
Wasiirka arrimaha dibadda Ciraaq Ibrahim al-Jaafari ayaa sheegay in ay ciidanka la dagaalanka argagixisada ka taageen calanka Ciraq qalcada qadiimiga ah ee la dhisay xilligii Cusmaaniyiinta ee ku taalla bartamaha magaalada Tal Afar.
Shir jaraa,id oo ay si wada jir ah ugu qabteen magaalada Baghdad Al-Jacfari iyo wasiiradda difaaca Faransiiska Florence Parly ayuu ku sheegay in todobaatan boqolkiiba la xoreeyey magaalada, inta harsanna ay dhawaan gacanta ku dhigi doonaan.
Saraakiisha amniga ayaa sheegay in qorshuhu uu yahay in magaalada Tal Afar laga xoreeyo Daacish ka hor maalinta Ciidul Adxa oo dalka Ciraaq looga dabaaldagi doono 2-da bisha September.
Howlgalka xoreynta magaalada Tal Afar ayaa bilowday 20-ki bishan Agust, waxaana ka qeybgalaya ciidamada Ciraaq oo garab ka helaya milatariga Mareykanka, waxayna u muuqdaan iney markiiba guulo deg deg ah ka gaareen dagaalka.